Ịnọ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ China Manufacturer
Nkọwa:Ebe obibi na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ,Akwụkwụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ,Na-ekpocha ihe nkiri
Home > Ngwaahịa > Mmiri na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na windo systerm > Mmiri ahụ ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ > Ịnọ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ
A na-eme otu ihe a ka eji mee ihe n'èzí. Ị nwere ike jikọọ ruo 15 Nkwụnye ụkwụ na otu Power Unit ma ọ bụ jikọọ Stair Mats ka Walkway Mats. Dịka ọmụmaatụ, jikọọ 3 Stair Mats na 4 Walkway Mats iji mepụta ụzọ dịpụrụ anya site n'ọnụ ụzọ azụ gị na ụgbọ ala ahụ. Ebe obibi obibi dị iche iche ga - ejikọta na Mats ebe obibi. Ha anaghị ejikọta na Ngwaahịa Ahịa. Ntọala ọ bụla na-ekpo ọkụ Snow-Melting (nke ruru 13 amps) chọrọ otu Ike Unit iji jikọọ usoro ahụ na eletrik.
Ebe obibi na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ Akwụkwụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ Na-ekpocha ihe nkiri Ebe a na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ Igbe na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ Mgbochi na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ Ihe na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ Onye na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ